Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo qaabiley wefti ballaadhan oo ka Socday dalka Qadar – Kalfadhi
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley wefti ballaadhan oo safar shaqo ku yimi Somaliland, kana socday dalka Qadar oo uu hoggaaminayo Ergayga gaarka ah ee Ra’iisal-wasaare ku-xigeenka, ahna wasiirka arrimaha dibedda ee dalka Qadar, Dr. Mutlaq bin Majed Al-Qahtani.
Ugu horrayna madaxweynaha Somaliland, ayaa warbixin dheer ka siiyey weftiga xaaladda guud ee Somalilanday mareyso maanta iyo halkii laga soo ambo qaaday geeddiga Dimuquraaddiyadda muddo soddon sanno ah, waxaanu madaxweynuhu weftiga ka guddoomay salaan ay uga sideen madaxda dalka Qadar.
“Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay in labada dhinac ay yeeshaan xidhiidh wanaagsan oo walaalnimo iyo iskaashi wada shaqayneed iyo in dalka Qadar halkan (Somaliland) ku yeesho xafiis Diblumaasiyadeed oo rasmi ah. Sidoo kale, waxa laga wada hadlay sidii hay’adda Qadar u qaabilsan mucaawimooyinka ee (Qadar Charity) ay xafiis uga furan lahayd Jamhuuriyadda Somaliland, loona xoojin lahaa xidhiidh wada shaqayneed oo dhinaca mucaawimooyinka ah iyo samafalka ah”, ayaa lagu yiri war kasoo baxay madaxtooyada Somaliland.
Madaxweynayaasha Hirshabelle, Galmudug iyo musharrax Shariif Sheekh Axmed oo ka wadda-hadlay arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul Wasaare Rooble oo lagu wareejiyay arrimaha doorashada iyo amnigeeda